Dhammaan wixii ku saabsan IFA: daahfurka iyo riwaayadaha lagu soo bandhigay carwada | Androidsis
El IFA waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn carwooyinka adduunka. Waxaa sanad walba lagu qabtaa magaalada Berlin bisha Sebtember halkaasna noocyada ugu waaweyn ee waaxdan ay ku kulmaan si ay ula socdaan hal-abuurnimadooda teknolojiyadda adduunka.
Haddii aad jeceshahay tikniyoolajiyadda, waa ballan aadan seegi karin. Halkaas waxaad ka ogaan doontaa mobiillada cusub, kiniinnada, telefishannada, kombuyuutarrada iyo aalado kale oo badan oo suuqa soo gala.
El IFA 2019 dhici doona laga bilaabo Sebtember 6 ilaa Sebtember 11 iyo kooxda Androidsis ayaa shaqsi ahaan uga soo qayb geli doona si aan kuugu soo tebiyo dhacdada. Waxaan kuu soo qaadan doonaa dhamaan sawirada, muuqaalada ugu fiican, wareysiyada lala yeelanayo khubarada ku xeel dheer waaxda iyo waxyaabo kaloo badan
Samsung ma xaadiri doonto IFA 2020
MWC 2020 ma ahayn dhacdada kaliya ee weyn ee loo baajiyay coronavirus-ka, in kastoo ...
Qualcomm waxay u adeegsan doontaa moodeellada 5G ee processor-keeda
by Eder Ferreno samee 2 sano .
5G waxay kasbatay joogitaanka suuqa, sidoo kale qaybta processor-ka. Meel labo ah ...
Kirin 990: processor-ka ugu awoodda badan shirkadda Huawei waa rasmi
Kirin 990 waxaa si rasmi ah loogu soo bandhigay IFA 2019. Dhowr todobaad ka hor Huawei waxay xaqiijisay in ...
TCL si loo soo bandhigo Taleefanka Magaca Magaca Hore ee IFA 2019
IFA 2019 ayaa qaabeynaysa, waxaanan arki karnaa in noocyo badan ay goobjoog ka ahaan doonaan dhacdadan. TCL waa ...
Nokia 5.2, 6.2 iyo 7.2 waxaa lagu soo bandhigi doonaa IFA 2019
Maalmo ka hor ayaa la xaqiijiyay in Nokia uu ka mid noqon doono astaamaha lagu arki doono IFA ...
IFA 2019: Waxaan u baahannahay inaan ogaano ilaa hadda
Sannadka oo dhan waxaa jira laba dhacdo oo waaweyn oo alaabooyin fara badan lagu soo bandhigo, gaar ahaan taleefannada casriga ah….
Laba taleefan oo cusub oo ka mid ah nooca Faransiiska: Wiko View 2 Plus iyo Wiko Harry 2
Nooca Faransiiska ayaa iibinaya oo hadda noo keenay laba taleefan oo cusub oo Android ah: Wiko View 2 Plus ...
Sony waxay ku soo bandhigeysaa telefoonno kala duwan IFA 2018
Maalmo yar gudahood IFA 2018 waxay ka bilaabmaysaa Berlin. Tani waa mid ka mid ah dhacdooyinka ugu muhiimsan ...
Huawei si ay u soo bandhigto EMUI 9.0 oo ku saleysan Android Pie at IFA 2018
Android Pie waxaa si rasmi ah loo sameeyay dhowr toddobaad ka hor. Hadda waa markasta magacyada in la bilaabo ...
Huawei P20 Pro wuxuu soo bandhigi doonaa laba midab oo cusub IFA 2018
Huawei P20 Pro ayaa suurtogal ah inuu yahay taleefanka ugu muhiimsan buugga soo saaraha Shiinaha. Naqshad leh ...
ZTE wuxuu ku soo bandhigi karaa Axon 9 at IFA 2019
2018 waa suurtagal sanadka ugu dhib badan ZTE taariikhdeeda. Laakiin waxoogaa yar ayay ku noqonayaan ...
CAT S31, dareenka ugu horreeya ee IFA 2017
CAT S41, kani waa taleefanka cusub ee aan la burburin karin ee ka socda CAT
Alcatel Idol 5s, waanu kuu tijaabinay
Alcatel A7, waxaan ku tijaabinay IFA 2017
Moto G5S Plus, waanu kuu tijaabinay
Sony Xperia XZ1 Compact, rayi ugu horeysay
Lenovo Phab Plus, oo ah muuqaal leh shaashad 6.8-inji ah
Samsung Gear S2, smartwatch-ka ugu fiican suuqa?
Alcatel OneTouch Xess, waxaan tijaabinay kaniiniga Alcatel ee 17-inji ah
Sidan ayaa ah qaabka loo yaqaan 'Steady Shot' ee Sony Xperia Z5
Lenovo Yoga Tab 3 Pro, oo ah kiniin aad u xiiso badan oo leh pirojektar pico
Alcatel OneTouch GO Play, falanqaynta fiidiyowga ee casriga cusub ee Alcatel
Acer Predator 8, waxaan tijaabinay kiniinka ciyaaraha ee Acer
LG G3 Stylus, waxaan ku falanqeyneynaa fiidiyowga casrigaan loogu talagalay suuqyada soo kordhaya
Tusaalooyinka sawirrada laga qaado Motorola Moto X (2014)